Ukuzaliswa kwezilwanyana zasekhaya ezingaqhelekanga
Ukugqithiswa ngakumbi kunomnqweno wokugcina indlu kungekhona nje ikati okanye inja, kodwa enye into eyongeziweyo, ayifani nayo yonke into. Nangona kunjalo, ukuze ufumane izilwanyana ezinqabileyo kwiimeko ezifanelekileyo, udinga amava kunye nekhono.
Ngaphandle koko, uza kuphinda ulibulale isilwanyana. Ngoko, abantu abaninzi banokubonakala bebandakanyeka ekuzaliseni izidalwa ezinjalo.
Enye yezona ziintlobo ezidumileyo zezilwanyana ezifuywayo. Ukugcina i-arthropods enjalo udinga i-terrarium. Ngenxa yesigcawu, amacwecwe ahlelwe, ahlanganiswe ngqongquthela lwe-costrate substrate. Iqondo lokushisa kufuneka libe ngama-23 kuya kuma-28 degrees. Ukutya kwesityikiti kubandakanya ama-invertebrates. Xa ibhinqa inomsila ngaphantsi kwesisu, ityalwe kwenye i-terrarium ngobukhulu be-20x20x20, ihlelwe njenge-mink. Kubonakala kwintombazana yakhe ayiyi kudla rhoqo, ukuze nje abambe enye ikhenkethi. Ngeli xesha, i-mink yakhe ibhalwa kunye nobunqamle beebubhubhu kwaye akukho nto iyakwazi ukuyiqonda. Ixesha lokuthoba liyakwazi ukuhlala kwiinyanga ezi-4-6. Inani lamaqanda kwi-clutch lingahluka ngokulinganayo ukuya kuma-300. Ubunzima bokuzalana nezicukuthwane kuyimfuneko yokuba ube neqela lezigulane ezahlukeneyo nobudala besini.
Enye yezilwanyana zasekhaya ezinqabile kakhulu ezinqabileyo yi-scorpion. Iimeko zokulondoloza zifana nezigulane, kuya kunokwenzeka ukondla iikhenkethi, iindiza, iinkumbi kunye nemfuyo. Ukutya kufuneka kubalwe ngokucacileyo kwaye kungadluli komgangatho. Ukukhanyisa kumele kube kukhanya kakhulu. I-Scorpions yizilwanyana ze-viviparous kwaye musa ukubeka amaqanda afana nezigulane. Banyamekela ngokunyamekela inzala kwaye bayayikhusela. Xa kuzaliswa izilwanyana ezinqabileyo ezizifuywayo, ezifana neeporpions, kuyimfuneko ukulinda ngokugqithiseleyo ukuluma kwe-arthropod kunye nokusebenza kunye nezilwanyana.
Mhlawumbi, enye yeentlobo eziqhelekanga zezilwanyana ezifuywayo yinkwenkwe encinane, ebizwa ngokuba ngumdlalo. Azisondli nje iintsholongwane, kodwa kunye nezinye iimveliso zityalo, ezifana neziqhamo, amajikijolo, ijusi yomthi. Ukukhulelwa kuthatha iintsuku ezingama-140. Njengomthetho, ii-2-3 cubs zizalwe, ezizimeleyo kwiinyanga ezintlanu sele zikhona. Ngokomgaqo, akukho ubunzima obukhulu ekuzaleni, kodwa ungazami ukutya.
Ukumemeza kokugqibela kwefashoni phakathi kokuzaliswa kwezilwanyana ezinqabileyo ezigcinwe ekhaya kuthathwa njengesiqhelo. I-aquarium kufuneka ibe yanele ngokwaneleyo ukuvumela ukuba umhlaba ungqonge kwisanti entlabathi. Le nkqubo iyadingeka ukuhlula i-mucus. Unokondla i-stingrays ngamagqabhule e-ice cream, i-shrimp ehlutshiwe kunye nentlanzi yokuloba. Urhulumente weqondo lokubaluleka kubaluleke kakhulu, ngoko ke ukushisa kwamanzi angancinci kunokunciphisa imeko jikelele yomzimba okanye kubangele ukugula.
Yintoni enye inokumangalisa phakathi kweentlobo zezilwanyana ezinqabileyo? Apha, umzekelo, i-konnail ahaatin. Le ngqungquthela ivela kwiindawo ezitshisayo zaseAfrika. UAkhatin unayo "iimpondo" ezine-ezimbini kwi-intloko yentloko, ezimbini phantsi kweentloko. Kwiingcebiso zamacangci angentla zikhombele ekukhanyeni. Ungatsho ukuba zibona ezi "mpondo". Kwaye izantsi ziyakwazi ukuqaphela izandi kunye nokuthunga. I-terrarium encinci idinga ukuphucula umoya kwaye igcine iqondo elifanelekileyo lokuhambisa amanzi. Ukuze uhlale unemihlali, kufuneka usebenzise i-heater. Emva koko, ezi zizilwanyana ezifudumele. Kubalulekile ukuba uhlale ucocekile kwi-terrarium, ukutshintsha umhlaba ngexesha elifanelekileyo, kuba apho babeka amaqanda.
Umgudu omkhulu kunyanzelekile ukuba kuzalwe amajelo. Umzekelo, ferret. Kubaluleke kakhulu ukukhetha umzekelo wokuzalisa. Xa ukhethe, uzame ukubhalisa inkxaso yomfuyi onamava, kuba iinyanga ezintandathu zokuqala zizona zinzima kakhulu. Unako ukufumana imbewu xa ufikelela kwinyanga eneminyaka eyi-9-10. Indoda mayibe yintlanga. Ukugonywa kwabasetyhini kunye nendoda kuyimfuneko. Ukukhulelwa kwi-ferrets kuthatha malunga neentsuku ezingama-40. Ngeli xesha le nkwenkwezi kufuneka ixhalabise kangangoko kunokwenzeka. Ama-6-7 cubs azalelwa ngokuqhelekileyo. Bazalelwa kwangaphambili, bayiyimfama kwaye abayizithulu. Isisindo somzimba - angabi ngaphezu kwama-10 amagremu. Ngokukhawuleza emva kokuzalwa, ibhinqa iqala ukondla ii cubs. Akunakwenzeka ukuwondla ngokufanelekileyo. Emva kweentsuku ezingama-23-26, ii-choriates ziqala ukudla okufanayo kunye nonina. Phantse kwinyanga enye, iintsana zivula amehlo abo, kwaye i-rumor ivela. Iintsana ezizimeleyo zize zibe ziinyanga ezi-3. Zizondla kakhulu izilwanyana, zifuna ukunakekelwa okhethekileyo kunye nokunyamekela. Ngoko ke, kukukhetha ukhethe umthengi oza kunika phezu kwezilwanyana zakho.
Ukuzaliswa kwezilwanyana ezingabonakaliyo zasemzimbeni kuyinyathelo elinoxanduva kwaye linzulu. Ekubeni ukuphathwa kakubi kunye nokunyaniseka kungabulala izilwanyana okanye uza kulimala. Kuqaphele ngokukhethekileyo ukujongana neentlanzi. Ngokukodwa iindidi ezinobuthi ezinobuthi. Ezi zizinto eziphilayo kwaye kufuneka zizinakekelwe kwaye zizinakekele.
Indlela yokwenza i jeans
Isipho esona sihle kunazo zonke
Senza iintyatyambo ezimnandi kwiiphiniki zephepha
Ukupheka umvundla ngokuchanekileyo kunye nokuhlwaya?
Isidlo neembotyi kunye neha
Yikuphi ukutya okukunceda ukulahlekelwa isisindo
Ilayisi yegolide neengulube kunye neengqondi
Nceda nceda! Ezi zidlo ezidumile ziyingozi empilweni nasempilo
Indlela yokuphepha ukukhulelwa ngexesha lokuncelisa?
INkosana William kunye noKate Middleton babonise iifoto ezintsha zeentombi zabo
Yintoni endiyenzayo xa nditshintsha umyeni wam?
Kutheni abafana bekhetha abafazi abadala kunabo?